Cervarix (သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Cervarix (သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေး)
Cervarix ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်သူတွေထိုးသင့်သလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာလဲ
Cervarix ကာကွယ်ဆေး ထိုးတဲ့အခါ
Generic Name: Cervarix (သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Cervarix ဆိုတာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆြာဖစ်စေနိုင်တဲ့ Human papillomavirus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့HPV 16 နဲ့ HPV 18 တို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။Cervarix ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၉နှစ်ကနေ ၂၅ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးတွေမှာ ထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
HPV ကူးစက်ခံရတာက အဖြစ်များကြပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လိင်ဆက်ဆံမှုကတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါပိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကူးစက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆြာဖစ်စေနိုင်တဲ့တခြားအကြောင်းရင်းတွေရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
Human papillomavirus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ်က လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့၊သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ စအိုကင်ဆာ၊အပြင်ယောနိမှာဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
HPV စစ်ဆေးမှု သို့မဟုတ် Pap Test (သားအိမ်ခေါင်းချွဲမြှေးယူစစ်ဆေးမှု) တို့လုပ်ဆောင်ပြီးရောဂါပိုးကူးစက်ခံခြင်းမရှိရင်Cervarix ကို ထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆေးက HPVကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေကိုမကုသနိုင် သလို HPV ကူးစက်ခံရပြီးသူတွေကိုလည်း ကုသနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Cervarix ကHPV အမျိုးအစား 16 နဲ့ 18 တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေကိုပဲ ကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်ပြီး HPVကြောင့်ဖြစ်တဲ့တခြားရောဂါတွေကို မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီအသက်အရွယ်ပိုင်းမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ဆေးမထိုးခင်မှာ ဒီရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီးသူတွေမဖြစ်စေဖို့မိန်းကလေးတွေမှာ တစ်ခါမှလိင်မဆက်ဆံရသေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတာကြောင့်ပါ။
မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက် သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးသားဖြစ်နေရင် ကာကွယ်ဆေးက အကျိုးထူးမှာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက မထိုးခဲ့ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း အသက် ၁၃ နှစ်နဲ့ ၂၆ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးတွေ ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အချိန်မှာ တခြားကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထိုးနိုင်ပါတယ်။
HPV ကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်တဲ့လူတွေ သို့မဟုတ် ဆေးထိုးဖို့အချိန်စောင့်ဆိုင်းသင့်တဲ့သူတွေကတော့ –
HPV ကာကွယ်ဆေးရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိလောက်အောင် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေ ဒါမှမဟုတ်HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့စဉ်က ဓါတ်မတည့်မှုပြင်းထန်ခဲ့သူတွေ (latex ဓါတ်မတည့်မှုအပါအဝင် ကိုယ့်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်မှုတစ်ခုခုရှိရင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ)
ဒီကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေထိုးလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကလေးနို့တိုက်မိခင်တွေတော့ ထိုးလို့ရပါတယ်။
ဒီဆေးကို Cervarix လက်မောင်းကြွက်သားမှာထိုးပေးတာဖြစ်ပြီး သုံးကြိမ်ထိုးရပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ကို အသက် ၉ နှစ်ကနေ ၂၆ နှစ်အတွင်း ဘယ်အချိန်မှာထိုးခဲ့ပါစေ၊ ထိုးပြီး ၁ လအကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ထိုးရပါတယ်။ ပထမဆေးထိုးပြီၤး ၆ လအကြာမှာတော့နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ဆေးထိုးရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဆင့်အတိုင်းမပျက်မကွက်ဆေးထိုးဖို့တော့လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင်ရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်း အပြည့်အဝမရရှိနိုင်ပါဘူး။
Cervarixဆေးက သင့်အတွက်ဘေးကင်းမကင်းသေချာစေဖို့အောက်ပါအချက်တွေသင့်မှာ ရှိနေရင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ –
သင်က ကင်ဆာဆေး၊စတီးရွိုက် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ခံအားကျစေနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေသောက်နေရသူဖြစ်ရင်
Cervarix က သန္ဓေသားကို မထိခိုက်စေနိုင်ဘူးလို့ မျှော်လင့်ရပေမယ့် ဆေးထိုးကာလအတွင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင် ဒါမှမဟုတ် ကလေးယူဖို့အစီအစဉ်ရှိရင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
Cervarix ကို ကမ္ဘာတလွှားမှာ အသုံးပြုနေကြတာနှစ်အတော်ကြာပြီဖြစ်ပြီးဘေးအန္တရာယ်လည်းကင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆေးတိုင်းမှာဘေးဥပါဒ်နဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက မကင်းကြပါဘူး။ အနည်းနဲ့အများသာပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာကွာခြားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ ထိခိုက်မှု၊သေဆုံးမှုဖြစ်ဖို့ကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအရမ်းနည်းပါတယ်။
တခြားကာကွယ်ဆေးတွေလိုပဲ HPVကာကွယ်ဆေးကိုလည်း ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့၊ပြင်းထန်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာခြင်းရှိမရှိ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Cervarix ကိုထိုးပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာသမျှထူးခြားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
Cervarixဆေးကိုထိုးပြီးရင် တချို့လူတွေမှာ မူးကနဲမိုက်ကနဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးထိုးပြီး ၁၅ မိနစ်လောက် ထိုင်နေ၊ လှဲလျောင်းနေသင့်ပါတယ်။
Cervarix ရဲ့အဖြစ်များတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတချို့က –
ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊
ဒါတွေအားလုံးကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးပါတဲ့အတိအကျမဟုတ်ပါဘူး။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းပြီး သူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ရယူပါ။